INetBase: Ipulatifomu ye-Enterprise Social Intelligence | Martech Zone
I-NetBase: Ipulatifomu ye-Enterprise Social Intelligence
NgeSonto, ngoJulayi 22, i-2012 NgoLwesithathu, Agasti 6, 2014 Douglas Karr
I-NetBase, eyayiyi-Accelovation phambilini, iyinhlangano yezobunhloli yezamabhizinisi evumela abacwaningi bemakethe ukuthi balinganise ukuzibandakanya kwabo kwezokuxhumana.
INet Base Monitoring Platform inika amandla abathengisi amathuluzi esikhathi sangempela wokuqapha kanye nokukala okunikeza ukuqonda okusheshayo nokusebenzisanayo kokushayela imibono yamakhasimende nokuziphatha. INetBase Insight Workbench inikeza abacwaningi bemakethe iqoqo le- analytics, amashadi namathuluzi okucwaninga.
Nasi isibonelo seNetbase's BrandPassion Index, esetshenziselwa ukunquma ukuhlaziywa kokuncintisana komkhiqizo (ngesibonelo esihle sokuthenga ngamaholide kubathengisi abakhulu):
ICustomerBase, ithuluzi elingemuva lapho iSocial Intelligence Platform isebenza khona, likhasa inetha, lifake izinkomba ezinyangeni eziyi-12 ezedlule zomsebenzi we-inthanethi, futhi lihlanganisa imicabango, imibono, nemibono yomkhiqizo, inikeze ukuqonda okusebenzayo.
Ukwahlukanisa okubalulekile kwamanye amathuluzi afanayo ukucubungula ulimi lwendalo. ICustomerBase ifaka phakathi ayeke-amagama njenge ngoba, by, ngoba or ngemuva i-Google nezinye izinjini zendabuko ezingakunaki. Ukufakwa okunjalo kuvumela ukucacisa umongo kanye nemizwa yangempela, okuvumela umbono ongcono. Isibonelo esiyiphutha: IGoogle izomaka ukushisa ngesincazelo esingesihle, kepha iCustomerBase ingacabanga ukushisa ekukhanyeni okuhle lapho ibinzana lisetshenziswa kumongo wokugeza umlomo.
I-USP enkulu yesibili ivolumu enkulu yedatha. Umsebenzi wezinyanga eziyi-12 ulingana nama-byte omsindo ayizigidi eziyizinkulungwane ezingamashumi amabili kusuka kumadokhumenti edijithali angaphezu kwezigidigidi eziyisikhombisa. Le nkampani ithi ikhomba imisho engama-50,000 XNUMX ngomzuzu emithonjeni enjenge-Facebook ebheke emphakathini, amabhulogi, izinkundla, ama-Twitter nezindawo zokubuyekeza abathengi.
Abamakethi bangasebenzisa i-NetBase njengethuluzi lokucwaninga emakethe, ukuqapha imithombo yezokuxhumana, noma ukuthola inzuzo yabo ekutshalweni komphakathi. Kusuka kusayithi labo:
Yenza ukulungiswa kwenkambo okusheshayo lokho ukwandisa impumelelo yomkhankaso kanye nemali etholakalayo. Lapho izwi lomphakathi likutshela ngokushesha lapho imikhankaso yakho iphumelela khona nokuthi kungani behlupheka, ungathatha isinyathelo sokuthuthukisa ukubuyiselwa kwemali oyisebenzisele ukumaketha.
Khulisa ukufinyelela komkhankaso ngo- ukukhomba abagqugquzeli abakhulu namathemba. Uyazi ukuthi kukhona "ama-VIP ezenhlalo" laphaya - abantu abamazwi abo ayezwakala njengoba betshela izinkulungwane zabalandeli ngomkhiqizo wakho nangabancintisana nabo. Bazi kahle ukuthi bangobani futhi ubanikeze izizathu eziningi zokuzibandakanya. Funda kabanzi.
Yenza ukwethulwa komkhiqizo omusha kuphumelele nge ngokuqapha ukwamukelwa kwamakhasimende kumkhiqizo omusha njengoba ungena emakethe nangokuletha izimpendulo ezisheshayo, ezihambisanayo kuzinkinga nezikhalazo ezingase zivele. Funda kabanzi mayelana nesisombululo sethu esisha sokulandela umkhondo wokuqalisa umkhiqizo.
Bheka impilo yomkhiqizo kaningi. Yenza izinqumo zomkhiqizo ezingcono futhi usheshise izimpendulo ezinsongweni zomkhiqizo ngeqoqo eliphelele lama-KPI ukukala nokuphatha impilo yomkhiqizo wezenhlalo ngesikhathi sangempela. Funda kabanzi mayelana nesisombululo sethu sokuhlaziywa komkhiqizo. Ukubona ukuthi impilo yomkhiqizo wezenhlalo isebenza kanjani ezinkingeni zebhizinisi lomhlaba wangempela, funda ukuhlaziywa kwe-Starbucks kubhulogi lethu.
Qagela izenzo zomncintiswano bese uphendula ngokushesha ezinsongweni zokuncintisana ngokuhlaziywa okusheshayo, kwesikhathi sangempela kumikhiqizo encintisanayo. Funda kabanzi futhi ubone i-Brand Passion Index yethu isebenza kubhulogi yeNetBase.
Qonda ukusabela okujulile kwezenhlalo emikhankasweni, ukuze wenze izinqumo ezinolwazi. Bona ibhulogi yethu ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuthi iWall Street Journal iyisebenzisa kanjani iNetBase ngombiko wayo wesonto lonke wokulandela imizwa.
Yenza okuningi ngesabelomali sakho esivele sikhona nezinsizakusebenza. Izixazululo zeNetBase zijwayele ukuhleleka futhi zihlele ukuphawula kwemithombo yezokuxhumana ngezigaba eziwusizo namamethrikhi. Esikhundleni sokuhlela ngesandla izinkulungwane zamazwana, izinsizakusebenza zakho ziyatholakala ukusebenza ekuthuthukiseni imikhankaso.
Qiniseka ukuthi ubamba umngane wethu, Jason Falls, owenza iSmart Smarts Webinar yeNetbase ngo-Agasti 15, 2012: Indlela ye-KISS eya empumelelweni yokumaketha ngeDijithali.
Tags: ukuhlakanipha kwezenhlalo kwezamabhizinisiipulatifomu yezobunhloli kwezamabhizinisii-netbaseukuqapha kwesikhathi sangempelaukuphathwa kwedumelaizibalo zomphakathiubuhlakani bezenhlaloisilinganiso somphakathiukuzibandakanya kwezokuxhumana
Douglas Karr Sunday, July 22, 2012 Wednesday, August 6, 2014
I-Alterian SDL | I-SM2: Ubunhloli Bezenhlalo
Umkhuba Wokumaketha Nge-imeyili: Kusetshenziswa Izinhlamvu Ezikhethekile Emigqeni Yesifundo
abalandeli bakho bezenhlalo
Jul 23, 2012 ku-1: 22 AM
Lapho uthenga Abathandi be-Facebook inani lezivakashi ekhasini lakho ngendlela efanele njengoba isayithi lakho lizokwanda, likwenza ukwazi ukusebenzisa kakhulu izingosi zokuxhumana zomphakathi ngenzuzo ekhulayo. Inani elikhulayo labantu njengamanje lisebenzisa izingosi zokuxhumana zomphakathi ekuthengeni ukuxhumana nabangane nemindeni yabo. Ngenani elingenamkhawulo lamakhasimende avula inethiwekhi usuku ngalunye unamathuba angenamkhawulo wokuletha inkampani yakho, izinsizakalo nezimpahla kumakhasimende angaba khona emhlabeni wonke.
I-Podcast yethu yakamuva